वर्षा सिवाकोटीले फेस बुकमा स्ट्याटस लेख्ने र मेटाउने बानी कुनै नौलो हैन। केहि दिन अघि दुश्मनी छैन भन्दै अर्की अभिनेत्री वर्षा राउतलाई खुला पत्र जस्तै स्ट्याटस लेखेर चर्चामा आउन खोजेकी उनले फेरी अर्को दुखले भरिपुर्ण स्ट्याटस लेखेकी छिन। शुक्रबारबाट उनी अभिनित चलचित्र ‘बीर विक्रम २’ र वर्षा राउत अभिनित चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ एकैसाथ प्रदर्शनमा आएका छन् । उनले विशेषतः यि दुई प्रतिक्षीत चलचित्र एकआपसमा जुध्ने भएपछि केहि फेसबुक स्टाटस लेख्दै आएकी छिन् ।
तर सामाजिक संजालमा दुई बर्षाबीच भिडन्त भन्दै टिका टिप्पणी हुन थालेपछि उनले लामो स्टाटस लेख्दै आफूहरु मिल्ने साथि भएको जनाएकी थिइन् । उनले उक्त स्टाटस वर्षा राउतलाई ट्यागसमेत गरेकी थिइन् ।
अब भने उनले आफ्नो फेसबुक वालमा एउटा स्टाटस लेख्दै सटायर हानेकी छिन् । तर त्यो स्टाटस कसका लागि हो त्यो भने बुझ्न कसिएको छैन ।
यस्तो छ उनको फेसबुकमा लेखएिको स्टाटस ‘अरु को कुभलो चितायेर मै खाउ र मै लाउँ भन्नेहरुलाई कुनै दिन कर्मले पक्कै पनि पिरोल्छ ! सायद आनन्द निन्द्रा पक्कै लाग्दैन !! मान्छेलाई छले नि भग्वानलाई छल्न पक्कै सकिन्न !! रोइ कराइ गरेर हिडेको सुन्न नपरोस् । ‘जय विर बिक्रम २’
उनले बारम्बार फेसबुकमा आफ्नो दुखेसो पोख्न थालेपछि अहिले सिने वृतमा उनको फिल्म चलाउन गरिएको स्टण्ड होकी भन्ने पनि अड्कल गर्न थलिएको छ। फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भन्दा पनि आफ्नो अभिनय र राम्रो स्क्रिप्टमा ध्यान दिने कि बर्षा जी !